September 21, 2021 - Celegroup
အွန်လိုင်းမှာ ကြည့်ရှုသူ သန်းချီသွားတဲ့ ခုတ်ထစ်ထားတဲ့ ကြက်သားတုန်းက အသက်ဝင်ခုန်ချ ဗွီယိုဖိုင်
September 21, 2021 Celegroup1975 0
ကမာၻႀကီးက ဆန္းၾကယ္မႈေတြနဲ႔ ျပည့္နက္ေနတယ္ဆိုတာ လူတိုင္းနီးပါးသိပါတယ္။ ခုတ္ထစ္ထားတဲ့ ၾကက္သားတုံးတစ္တုံးဟာ အသက္ျပန္ဝင္လာတယ္ဆိုရင္ ဘယ္သူမွယုံမွာမဟုတ္ပါဘူး။ စားေသာက္ဆိုင္တစ္ဆိုင္ရဲ႕ စားပြဲေပၚမွာခုတ္ထစ္ထားတဲ့ ၾကက္သားတုံးတစ္တုံး- အသက္ျပန္ဝင္လာတဲ့ပုံကို ထိတ္လန႔္ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ ဗြီဒီယိုမွတ္တမ္းတစ္ခု တင္ထားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ စားေသာက္ဆိုင္ရဲ႕စားပြဲေပၚမွာ အျခားအသားေတြနဲ႔အတူ တင္ထားတဲ့ၾကက္သားပန္းကန္ျပား တစ္ခ်ပ္ကိုဗြီဒီယိုထဲမွာေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အဲဒီေနာက္မွာ ၾကက္သားတုံးတစ္တုံးက တြန႔္လိမ္လႈပ္ရွားလာတာကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ၾကက္သားတုံဟာ သူဘာသာသူေျမာက္တက္လာၿပီးေတာ့ ပန္းကန္ျပားေပၚမွာစတင္တြန႔္လိမ္လာလို႔ ၾကည့္ေနတဲ့သူေတြအံ့ၾသမွင္သက္သြားေလာက္ေအာင္ကို ထမင္းစားပန္းကန္ျပားထဲကေနဆြဲခ်သြားပါတယ္။ ကက္သားတုံးကၾကည့္ေနတဲ့အမ်ိဳးသမီး ေၾကာက္လန႔္တၾကားျဖစ္ေစအထိ သက္ဝင္လြန္းပါတယ္။ ဒီဗြီဒီယိုကို Rie Phillps ဆိုသူက […]
နေစရာစားစရာမရှိလို့ အားကိုးတကြီးနဲ့ သားဆီသွားလိုက်မိခဲ့တဲ့ မိခင်အိုကြီးတစ်ဦးရဲ့အဖြစ်
မိဘရဲ့တန္ဖိုးကို နားလည္နိုင္ၾကစေခ်င္ပါသည္။ လူတိုင္လူတိုင္းမွာ အႀကီးမားဆုံး ေက်းဇူးရွင္ဆိုတာ မိဘဆိုတာကလြဲၿပီး အျခားမရွိပါဘူး..။ အခုျကားသိရတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေလးကို ၾကည့္ၿပီး စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါတယ္။ ေနစရာ စားစရာမရွိလို႔ အားကိုးတႀကီးနဲ႔ သားဆီသြားတဲ့ ေဒၚေအးက်င္ ဆိုသူ အဘြားအို တစ္ေယာက္သား က လက္မခံလို႔ ျပန္လာၿပီး ဘယ္သြားလို႔ ဘယ္လာရမွန္မသိပဲ ကားဝင္းမွာ ဒုကၡေရာက္ေနလို႔ မႏၲေလး နန္းေရွ႕လူမႈကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕နဲ႔ေတြ႕ၿပီး ဘိုးဘြားရိပ္သာေနမလားလို႔ ေမးၿပီး ေနမယ္ဆိုလို႔ေရတံခြန္ေတာင္ေပၚက YGW ဘိုးဘြားရိပ္သာကို ပို႔ေဆာင္ ကူညီေပးခဲ့ရေၾကာင္း […]
ဆက်မောင်းလို့ရမယ် မရဘူးဆိုတာ ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲ ?
ဆက်မောင်းလို့ရမယ် မရဘူးဆိုတာ ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲ ? မောင်းလို့ရတယ် မရဘူးဆိုတာ ? ၁။ ဘီးလေမရှိဘူး / လေအရမ်းနည်းနေတယ်။မောင်းလို့မရဘူး !!!တာယာလိမ်သွားမယ်။ တာယာပျက်စီးသွားမယ်။ လေထိုးပါ / အပိုဘီးနဲ့လဲပါ။ ၂။ အင်ဂျင်ဝိုင်မရှိဘူး / အင်ဂျင်ဝိုင်မီးပြနေတယ်။မောင်းလို့မရဘူး !!!အင်ဂျင်နာမယ်။ အင်ဂျင်ချရတဲ့အထိ ဖြစ်နိုင်တယ်။ အင်ဂျင်ဝိုင်ဖြည့်ပါ / စစ်ဆေးပြုပြင်ပါ။ ၃။ Heat မီးပြနေတယ် / Heat တက်နေတယ်။မောင်းလို့မရဘူး !!!ဂတ်စကတ်ပြတ်မယ်။ အင်ဂျင်ချရတဲ့အထိဖြစ်နိုင်တယ်။ စစ်ဆေးပါ […]
အပ်ိဳေဖာ္ဝင္ခါစ ၁၆ ႏွစ္သမီးေလးအခန္းထဲကို အေဖတစ္ေယာက္ ဝင္ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါ
September 21, 2021 cele group 0
အခန္းက သပ္ရပ္ေနၿပီး စားပြဲေပၚမွာ စာတစ္ေစာင္ တင္ထားတာ ေတြ႕လိုက္ပါတယ္ စာကို ဖတ္ၾကည့္တဲ့အခါ ခ်စ္ေသာေဖေဖ ဒီစာကို ေရးရတဲ့အတြက္ စိတ္မေကာင္းပါဘူး ။ ေဖေဖနဲ႔ ေမေမကို တကယ္ခ်စ္ပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္ သမီးရဲ႕ ခ်စ္သူေနာက္ကို အၿပီး လိုက္သြားပါၿပီ။ စိတ္မဆိုးပါနဲ႔ ေဖေဖ သူကသမီးအေပၚ ေကာင္းပါတယ္။အျပင္ပန္းက တက္တူးေတြ၊ ေဆးမင္ေၾကာင္ေတြဘယ္ေလာက္ပဲမ်ားမ်ား သူသမီးကို တကယ္ခ်စ္တာ ခံစားမိပါတယ္။ သမီးထက္ ၁၄ ႏွစ္ ပိုႀကီးတယ္ေလ။ အိမ္ေထာင္ကြဲေပါ့။ […]
ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောကို ပျက်စီးစေသည့် အကြောင်းအရာ ၁၀ မျိုး
ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောကို ပျက်စီးစေသည့် အကြောင်းအရာ(၁၀)မျိုး ၁။ မနက်စာမစား​ခြင်း မနက်စာမစားတဲ့လူတွေမှာ သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ပမာဏ လျော့ကျနိုင်ပါတယ်။ ဒါက ဦးနှောက်အတွက်လိုအပ်တဲ့ အာဟာရလုံလုံလောက်လောက်မရဖြစ်စေပြီး ဦးနှောက်ပျက်စီးခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ၂။ အစာအလွန်အကျွံစားခြင်း ဦးနှောက်တွင်းမှာရှိတဲ့ သွေးလွှတ်ကြောတွေကို မာကြောစေပြီး စိတ်စွမ်းအင်ကို လျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။ ၃။ ဆေးလိပ်သောက်​ခြင်း ဦးနှောက်ကို အကြိမ်ပေါင်းများစွာကြုံ့စေပြီး အယ်ဇိုင်းမားရောဂါဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ၄။ အချိုအစားများခြင်း သကြားဓာတ်များလွန်းခြင်းက ပရိုတင်းဓာတ်နဲ့ အာဟာရတွေစုပ်ယူခြင်းကို အနှောင့်အယှက်ပေးနိုင်တာကြောင့် အာဟာရချို့တဲ့ခြင်းနဲ့ ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးခြင်းတို့မှာ အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ […]
ရေတော်၅မျိုး နှင့် ဆက်ကပ်ခြင်း အကျိုး
ရေတော်(၅)မျိုး ဆိုသည်မှာ ၁။ မျက်နှာသစ်တော်ရေ ၂။ သောက်တော်ရေ ၃။ သုံးတော်မူရေ ၄။ ချိုးတော်ရေ ၅။ ခြေဆေးတော်ရေ ရေတော် (၅)မျိုးကို ဆက်ကပ် လှူဒါန်းခြင်း၏ အကျိုးရလဒ်များမှာ – ဘဝ မှာ အေးချမ်းမှူတွေ ရရှိခြင်း ၊ အလုပ်ကိုင် အကြံအစည် မှန်သမျှ ထမြောက်အောင်မြင်ခြင်း ၊ စိတ်ချမ်းသာ လူချမ်းသာ သည့် ဘဝကိုရရှိခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်… zawgyi ေရေတာ္(၅)မ်ိဳး ဆိုသည္မွာ […]
ဖါးဥစွဲနေတဲ့ အဝတ်အ စားတွေကို အရောင်မပါးအောင် ချွတ်နည်းလေးများ
ဖါးဥစွဲနေတဲ့ အဝတ်အ စားတွေကို အရောင်မပါးအောင် ချွတ်နည်းလေးများ အကျင်္ ီတွွေမှာစွဲနေတဲ့ ဖားဥတွေကို အထိိရောက်ဆုံး ချွတ်နည်း မိုးရာသီမှာ အကျင်္ ီဖားဥစွဲတဲ့ ပြဿနာကြောင့်် အိမ်ရှင်မတွေ စိိတ်ညစ်ရပါတယ်။ ဖားဥကို ချွတ်ချင်ဇောနဲ့ လျှော်ပေမယ့် မပြောင် ၊ ချွတ်ဆေးတွေသုံးတော့လဲ အရောင်တွေကွက် ၊ အကျီင်္တွေပါးနဲ့ အင်မတန်မှ စိတ်ရှုပ်ရပါတယ်။ အကျီင်္ လဲမမွဲ ၊ လူလဲမထိတဲ့ အိမ်မှာရှိတဲ့ သဘာဝပစ္စည်းလေးတွေနဲ့ ဖားဥစွဲတာကို ဖယ်ရှားလို့ရပါတယ်။ […]
အလွန်အဖိုးတန်ပြီး မှတ်သားထိုက်တဲ့ ဝိသာခါကို သူ့အဖေဆုံးမတဲ့ စကား (၁၀) ခွန်း
အလွန်အဖိုးတန်ပြီးလူတိုင်းသိထားသင့်တဲ့ ဝိသာခါကို သူ့အဖေဆုံးမတဲ့စကား (၁၀)မျိုး – ( ၁ ) အိမ်တွင်းမီး အပြင်မထုတ်ရ။ ( ၂ ) အိမ်ပြင်မီး အတွင်းမသွင်းရ။ ( ၃ ) ပြန်ပေးမည့်သူကိုသာပေး။ ( ၄ ) ပြန် မပေးမဲ့သူကို မပေးနဲ့။ ( ၅ ) ပေးသင့်သူကိုလည်း ပေး။ ( ၆ ) ချမ်းသာစွာထိုင်။ ( […]
ကံကောင်းစေနိုင်သည့် အိပ်မက်နိမိတ်လေးများ အိ မ်မက် အမျို;မျိုးရှိပါတယ်။တစ်ချို့ အိမ်မက် တွေ က ရှေ့မှာ ဖြစ်လာ တော့မယ့် အရာတွေကို နိမိတ် ပြတဲ့ အိမ်မက် မျိုးတွေရှိပါတယ်။ ဒီလို အရာ တွေကို မယုံကြည်တဲ့ လူမျိုးတွေ ရှိ ကောင်းရှိ နိုင် ပေမယ့် အပြင် မှာ တကယ်လည်းဖြစ်ခဲ့၊ရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ သာ ဓက တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ပိုက်ဆံဝင်ခါနီးရင် ဘယ်လို အိမ်မက် […]
ရှေးလူကြီးတွေ ပြောခဲ့တဲ့ ဆိုရိုးစကားတွေ အတိတ်တဘောင်တွေဟာ ဒီဘတ်ခေတ်မှာတော့ အမှန်တွေ
ရှေးလူကြီးတွေ ပြောခဲ့တဲ့ အတိတ်တဘောင်တွေ မှန်ပုံကတော့ဒီနေ့ခေတ်ကို ဘေးကနေ ထိုင်ကြည့်ပြီး ပြောနေသလား မှတ်ရတယ်ဗျာ။ ကွက်တိကို မှန်နေတော့တာပဲ။အဲဒါကြောင့် “အတိတ်တဘောင်ဆိုတာ နိမိတ်ဆောင်တယ်”ဆိုတဲ့ စကားပုံ ပေါ်လာတာ ဖြစ်ရမယ်ဗျ။ ရှေးလူကြီးတွေရဲ့ အမြင်စူးရှပုံကတော့ ချီးကျူးဖို့ ကောင်းပါတယ်။ရှေးလူကြီးတွေ ပြောခဲ့တဲ့ အတိတ်တဘောင်တွေကိုအောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြ လိုက်ရပါတယ် ခင်ဗျာ။ တရားကို တေးဆို ၊ အဖေကိုသားကဆဲ၊ ဆွေမျိုးထဲက ဓါးပြတိုက် ၊ မိုက်လျှင်သောတာပန်၊ မကောင်းကြံလျှင် သမာဓိ၊ ရွှေရှိမှ […]
ဒုက္ခနဲ့ သောကဆိုတာ တစ်ယောက်တည်းအတွက်မှ မဟုတ်တာ…..
ဒုက္ခနဲ့ သောကဆိုတာ တစ်ယောက်တည်းအတွက်မှ မဟုတ်တာ….. မတူညီသော ညီမျှခြင်းဘဝမှာ အတွေ့အကြုံနဲ့ရင့်ကျက်မှုဟာ အရေးကြီးပါတယ်သို့ပေမယ့် သူတို့ဟာနုပျိုခြင်းနဲ့ ခွန်းအားမှာ ကျရှုံးကြရတယ် အလှတရားမပြည့်စုံတဲ့ မျက်နှာဖုံးကိုကြည့်ပြီးမျက်နှာမမဲ့ပါနဲ့တချို့ ချို့သော လှပမှုတွေဟာအနှစ်မရှိတဲ့ ဖန်တီးယူမှုတွေပါ အတ္တရဲ့ ပြင်းပြမှုဟာတစ်ခါတလေမှာ အထီးကျန်ရသလိုမခံချင်စိတ်ရဲ့ ပြေးလွှားမှုဟာအရိပ်ကောင်းဖြစ်စေနိုင်တယ်မျှဝေတတ်တဲ့ စိတ်ရှိရင်ပေါ့။ ဘဝမှာ အားငယ်ချိန်များလာရင်ကိုယ့်ဖြစ်တည်လာမှုကိုဝမ်းနည်းလာတတ်တယ်အဲ့လိုချိန်တွေမှာကိုယ့်ရဲ့ အသိဉာဏ်ပိတ်နေတတ်တယ်ကိုယ့်ထက် မပြေလည်တဲ့တစ်ပါးသူပေါင်းများစွာကိုပေါ့ ကျွန်တော်တို့ ဖိနပ်မကောင်းလို့အားငယ်နေချိန်မှာတချို့တွေ စီးနင်းစရာ ဖိနပ်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့မိုးရွာထဲ မိုးကာဝတ်ထားချိန်မှာ တချို့တွေ မိုးရေထဲခိုက်ခိုက်တုန်နေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ ဟင်းမကောင်းချိန်မှာတချို့တွေ ဆန်ရှာဖို့ ခက်ခဲနေတယ်ကျွန်တော်တို့ […]